Lacagta yaabka leh ee lagu iibsaday dhulka Tiyaatarka – Benaadir News Network
Muqdisho (Benaadir News) –Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Cismaan Dubbe ayaa lagu sheegay in la hakiyey “ijaarka iyo dib u hawl-gelinta maqaaxida” Tiyaatarka Qaranka, isaga oo fulinaya amarka Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, sida uu ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray.
Xog ay heshay Benaadir News ayaa sheegaysa in dhulkaan oo ka tirsan dhismaha Tiyaatarka islamarkaana ah meel banaan oo ka kooban dhowr boos lagu wareejiyay Shirkadda Xaawo Taako, oo ay leeyihiin ganacsato.
Benaadir News ayaa og in hakinta ay tahay mid afka un ku kooban oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhalatay dhulkan oo xaqiiq ahaan la iibiyey, islamarkaana qorshaha looga sameynayo goobo ganacsi uu sidiisa yahay.
Previous Filimka Muqdisho oo noqday kan loogu daawasho badan yahay Korea-da Koonfureed – Muxuu ku saabsan yahay?
Next Wararkii ugu dambeeyey doorashada HirShabelle ee Aqalka Sare